Mụta iji Firefox Chat kpamkpam n'efu | Akụkọ akụrụngwa
Kedụ ka nkata ọhụụ si arụ ọrụ na Firefox? Ugbu a anyị na-egosi gị
Timefọdụ oge gara aga, Mozilla kpọtụrụ aha akụkọ na-atọ ụtọ banyere ihe nchọgharị Firefo gịx, ebe ekwuru na na nsụgharị ọzọ (site na nwelite) ọ ga-ekwe omume ịnụ ụtọ ọrụ ọhụụ.
Nke a "ohuru atụmatụ" a na-akpọ "Ndewo", nke enwere ike iji ya site ugbua rue mgbe ichoro mmelite ohuru nke Mozilla choputara. Anyị na-ezo aka kpọmkwem na nsụgharị 34 nke Firefox, nke ewepụtara ụbọchị ole na ole gara aga na ebe ọrụ "Hello" a jikọtara.
1 Etu esi rụọ ọrụ akara ngosi akara ngosi na Mozilla Firefox?
2 Malite na-akparịta ụka na ndị enyi anyị si Mozilla Firefox
Etu esi rụọ ọrụ akara ngosi akara ngosi na Mozilla Firefox?
Ọ bụrụ n ’ịlele ogwe ngwaọrụ dị n’elu na Mozilla Firefox ị ga - achọpụta na ọ naghị adị ebe ahụ (n’echiche) enweghị ihe ọ bụla na-ezo aka na ọrụ "nkata" na ndị enyi anyị. Ọrụ a na-ezo, nke a ga-egosipụta naanị ma ọ bụrụ na anyị ga-eji ya. N’iburu n’uche na ọtụtụ oge anyị na-ejuputa oghere a na ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke mgbakwunye ma ọ bụ ndọtị anyị nwere ike ịwụnye maka otu ọrụ, Mozilla tụlere na ọ bụ onye ọrụ ga-ejikwa mpaghara ahụ.
Ọzọ anyị ga-ekwupụta usoro ị ga - agbaso iji nwee ike igosi akara ngosi iji soro ndị enyi gị "kparịta ụka", ihe dị mfe ịgbaso na nke na-anọchite anya ihe ndị a:
Ẹkedori gị Mozilla Firefox nchọgharị. I kwesiri iburu n'uche na nkata a di site na 34 di elu).
Pịa na menu hamburger dị na nri aka nri (akara ngosi ahụ na ahịrị ndị ahụ).
Mpio windo ga-emeghe, na-a attentiona ntị na ọrụ ndị dị na ala ya.
E odude nhọrọ na-ekwu, «hazie«, Nke ị ga - ahọrọ.
Anyị ga-abanye ozugbo na mpaghara ọhụrụ n'ime ihe nchọgharị Firefox a.
Site na usoro anyị kwuburu na mbụ, ugbu a, anyị ga-ahụ onwe anyị na nhazi ma ọ bụ nhazi mpaghara nke ogwe ngwaọrụ Mozilla Firefox. N'aka ekpe, e nwere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ihe ndị ọzọ, na-enwe họrọ nke ahụ nwere ihu ọchị, ebe ọ bụ na ọ na-anọchi anya akara ngosi nke ọrụ maka «ikori"na ndị enyi anyị. Mozilla chọrọ imepụta ihe dị iche na aha ọrụ a, n'ihi na ị ga-ahụ ka akpọrọ ya "Ndewo".
All anyị ga-eme bụ iji họrọ ya na mgbe ahụ Were ya gaa ebe anyị hụrụ ya. N'ozuzu, ụdị akara ngosi ma ọ bụ ọrụ a na-etinyekarị n'akụkụ aka nri nke ogwe ngwaọrụ, ebe mgbakwunye ma ọ bụ ndọtị nke anyị na-etinyekarị na ihe nchọgharị Internetntanetị a. Ozugbo anyị mere ọrụ a, akara ngosi ahụ ga-anọ ebe ahụ, a ga-echekwa mgbanwe ndị ahụ na bọtịnụ na njedebe nke windo a.
Malite na-akparịta ụka na ndị enyi anyị si Mozilla Firefox
Anyị egosiworị akụkụ nke mbụ, yabụ ọ bụ oge iji gbalịa bido soro ndi enyi anyi kwurita okwu. Only ga - ahọrọ akara ngosi anyị jisiri ike napụta na mbụ, ihe ga - eme ka ọ dị ka obere windo nwere njikọ. N'otu aka ahụ anyị ga-e copyomi ya ma zigara ya ndị enyi anyị emesịa, ebe ọ bụ na ọ ga-abụ ụzọ nkwukọrịta iji kpaa nkata.
Nwere ike izipu njikọ a ma ọ bụ jikọta site na email, dịka nke ndị ọrụ ibe anyị họpụtara, anyị ga-enweta ọkwa ozugbo na anabatara ọkpụkpọ oku yana yabụ, na anyị nwere ike malite ikwu okwu site na usoro ihe a. Ọ bụ onye ọrụ njedebe ga-ekpebi ma ọ ga-eme mkparịta ụka vidiyo na ọdịyo ma ọ bụ vidiyo, yabụ ga-anwa ịnye ikike dị iche iche maka ngwa ọrụ ka o wee nwee ike iji ihe ndị dị mkpa maka nke a mee.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » Kedụ ka nkata ọhụụ si arụ ọrụ na Firefox? Ugbu a anyị na-egosi gị
Kedu ihe kpatara ọkụ kọmpụta kọmpụta ji abịa na Windows?
Olee otú ihichapụ gụgharia foto site na iPad ma ọ bụ iPhone ọsọ ọsọ na mfe